ကမ္ဘာကျော်ဂုတ်ထိပ်တံတားအောက်မှ ခေါ်သံ (သို့) လျှို့ဝှက်ဂူကြီးဆီသို့ ရေစီးမျောခြင်း 🏞 – YANGON STYLE
ကမ္ဘာကျော်ဂုတ်ထိပ်တံတားအောက်မှ ခေါ်သံ (သို့) လျှို့ဝှက်ဂူကြီးဆီသို့ ရေစီးမျောခြင်း 🏞
ကမ္ဘာကျော်ဂုတ်ထိပ်တံတားအောက်မှ ခေါ်သံ (သို့)
လျှို့ဝှက်ဂူကြီးဆီသို့ ရေစီးမျောခြင်း 🏞
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့် …….
Adventure မှ Adventure စွန့်စားပြီးသွားရတာမှ ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် ကမ္ဘာကျော်ဂုတ်ထိပ်တံတားကြီးမှ လှမ်းခေါ်နေပါတယ်🤩
ဂုတ်ထိပ်တံတားလို့ ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တံတားပေါ် ရထားစီးရတာ ညည်းငွေ့နေပြီဆိုတဲ့သူတွေအတွက် တံတားကြီးအောက်မှာ တိမ်မြှုပ်နေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ တံတားပေါ်ကနေ ဖြတ်တိုင်း အောက်က ဂုတ်တွင်းချောင်းကြီးနဲ့ လျှိုမြောင်ကြီးကို အမြဲတွေ့ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကြီးမားလှတဲ့ဂူကြီးရှိတာတော့ လူသိနည်းပါတယ်။
ဒီလို ဂူထဲသွားတာကတော့ မနှစ်တည်းက ခေတ်စားလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် Safety မဖြစ်မှာကြာက်တာနဲ့
မြေမြုပ်မိုင်းတွေရှိသေးတယ် ပြောကြတာနဲ့ မသွားရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ စွန့်စားပြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေသွားတာမြင်ဖူးတယ် တောင်တက် တောတိုး နွယ်ခိုရင်းသွားကြတယ်ပေါ့။ သဒ္ဓါတို့လဲ သွားရင် အဲ့လိုပဲသွားရမယ်ထင်တာပေါ့။🙄
ဒါပေမယ့် ဒေသခံ Guide နောင်ချိုတာဇံကြီး ကိုအောင်ရဲ့ ဆွဲခေါ်မှုကြောင့် ဂုတ်တွင်းချောင်းထဲကနေ သွားခဲ့ကြပါတယ်။ တံတားအောက်မှာ စီးနေတဲ့ချောင်းက မိုင်းတင်းချောင်းနဲ့ ဆိတ်ဖူးချောင်းပေါင်းပြီး ဂုတ်တွင်းချောင်းဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ သဒ္ဓါက ရေမကူးတတ်ပါဘူး။ ရေလဲအရမ်းကြောက်တဲ့လူပါ။ အဲ့တော့ အရမ်းကို surprise ပါပဲ 😫 စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ ရေစီးသန်တဲ့ ချောင်းကြီးကို ဖြတ်ရတာ ဘဝမှာ ပထမဆုံးပါပဲ။ Life Jacket ပါပြီး Safe ဖြစ်ပါတယ်။ Guide ရဲ့စကားတော့နားထောင်ပါ သူ့နောက်ကပဲလိုက်ပါ။
✔️ ဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားကြမလဲ ?
ခရီးလမ်းကြောင်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ရန်ကုန်ကနေ ဒေသခံ guide ကို ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးသွားမယ့်နေ့ရက်ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့ဆီမှာ Package တွေရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန် – နောင်ချို ကားလက်မှတ်ဝယ်။ သဒ္ဓါတို့က Elite နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကို ၁၇၀ဝ၀ ပါ။ ည ၈နာရီထွက်ပြီး မနက် ၈ နာရီလောက် နောင်ချိုကိုရောက်ပါတယ်။ နောင်ချိုရောက်ရင် မေမန်းဆိုတဲ့ ဂိတ်မှာဆင်းပြီး Guide ကလာခေါ်ပါတယ်။ ပြီးရင် မနက်စာလိုက်ကျွေးပါတယ်။ နေတာကတော့ Guest House မှာပဲနေပါတယ်။ တစ်ခန်းမှ ၁၅၀ဝ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ပါ Guide ပဲလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။
ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားတစ်စုံအပိုယူပြီး ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံးနဲ့ ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ စထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်ချိုမြို့အကျော် သီပေါသွားတဲ့လမ်း ဂုတ်တွင်းလမ်းအတိုင်း လာခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ လောက်သွားပြီးရင် ကားရပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ တစ်ဆင့်၁၅ မိနစ်လောက်သွားရပါတယ်။ တံတားကြီးကို အောက်ကနေမြင်နေရပြီဆိုရင် အောက်ကလျှိုထဲကို လမ်းလျှောက်ဆင်းရပါတယ်။ အဲ့ကစတာပါပဲ 🤩
ကဲ ချောင်းထဲစဆင်းရပါတော့မယ်။ ပါလာတဲ့ လွယ်အိတ်တွေ ဖုန်းတွေကို နောက် Guide တစ်ယောက်က သယ်ပေးပြီး ချောင်းဘေး ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်ကနေ လိုက်လာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေလဲ သူပဲရိုက်ပေးပါတယ်။ Surprise စပါပြီနော်။ ထင်ထားတာက လမ်းလျှောက်ရမယ် ချောင်းဖြတ်ရတယ်ဆိုတာလဲ ဟိုဘက်ဒီဘက် ခဏဖြတ်ရမယ်ပဲထင်ထားတာ။ Life Jacket နဲ့ ဝါးလုံးကြီး တစ်လုံးချပေးပါတယ် 😖
ဘာများလဲပေါ့ ? ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ ပါလာတဲ့ အဖော်တွေနဲ့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ဆင်းကြတာပေါ့😂
စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ပါ။ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် တောတောင်ရေမြေ အလှတွေကတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ တခြားကမ္ဘာတစ်ခုရောက်သွားသလို၊ အမေဇုံ တောကြီးထဲရောက်သွားသလိုလို၊ တိမ်မြှုပ်နေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးထဲ ခေတ္တရောက်သွားသလို တိတ်ဆိတ်နေပြီး အရာအားလုံး မှင်သက်စရာတွေကြီးပါပဲ။ Guide ကလဲ သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး မကြောက်ရအောင်ခေါ်သွားပါတယ်။
၂ နာရီလောက် ရေမျောလိုက်၊ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်က တက်သွားလိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာ ဂူကြီးကိုတွေ့ရပါပြီ။ ဂူအဝင်ဝမရောက်ခင် တွေ့ရမှာကတော့ ဂျပန်ခေတ်က တံတားကြီးကို မိုင်းခွဲခဲ့လို့ တံတားပျက်ကြသွားတဲ့ သံထည်အပိုင်းအစတွေကို တွေ့ရမှာပါ 🤩 အမေးဇင်းပါပဲ ရေစီးသန်တဲ့ ချောင်းထဲ ချောင်းကိုဖြတ်ထားတဲ့ သစ်လုံးကြီးတွေကိုလဲ ဖြတ်ရပါတယ်။ ဂမုန်းတောကြီးကိုလဲ ဂူရှေ့မှာတွေ့ရမှာပါ။ အပေါ်မှာကတော့ ရထားသွားနေတဲ့ တံတားကြီးပေါ့။ ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ။ ဂူကတော့အရမ်မြင့်ပါတယ်။ ဂူမျက်နှာကြပ်မှာလဲ လင်းနို့တွေ လင်းဆွဲတွေကြီးပါပဲ 😫 မှောင်မဲပြီး အထဲကိုသွားဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရတဲ့ ဂူကြီးပါ။ နေရာအနှံ့လဲ လင်းနို့ချေးတွေကြီးပါပဲ။ အသည်းယားတတ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ပေါ့။
ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေနဲ့ ဂူထိပ်က ရေတွေကျနေတာလဲ အရမ်းလှပြီး ဂူက နှစ်ဖက်ပွင့်ဂူဆိုတော့ ဂူအောက်က ချောင်းထဲကနေ ရေကူးသွားရင် ဒုတိယဂူနဲ့ တတိယဂူကို ရောက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းမှောင်ပြီး ရေစီးသန်တဲ့အတွက် အမှောင်ကြောက်တဲ့ သဒ္ဓါ့အတွက်ကတော့ လုံးဝမသွားရဲပါဘူး ☹️ ဓာတ်မီးထိုးပြီး စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ သွားလို့ရသလောက် သွားခဲ့ပါတယ် ။ ရေညှိတွေနဲ့ ကျောက်နံရံတွေကို ကုတ်ကပ်တတ်ရတော့ အသက်ရှူ ရပ်မတတ်ပါပဲ။
အပြန်ကတော့ ရေစီးမသန်တဲ့နေရာအထိ ရေဆန်ကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ guide ကဆွဲ ကိုယ်ကနောက်ကနေလိုက်ပေါ့😁 နောက်ဆုံး ရေစီးကသန်တော့ ရေဆန်ကို သူလဲမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ကုန်းလမ်းတဝက်သွားမယ်ဆိုပြီး ဖြတ်လမ်းကနေ လာခဲ့ပါတယ်။
နွယ်ခိုတဲ့ နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်။ experience အသစ်ရတာပေါ့ ကျောက်ဆောင်တွေကြား အောက်က ရေစီးသန်တဲ့ ချောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး အသဲတယားယားနဲ့ နွယ်ခိုပီး သွားရတာတွေရှိပါတယ်။ လမ်းပြ ကိုအောင်ကတော့ အရမ်းတော်ပါတယ် သူပြောတဲ့အတိုင်းသာ လိုက်နာပါ။ အပြန်ကတော့ ဖြတ်လမ်းအတိုင်း တောင်းစောင်းမတ်မတ်ကြီးကို တက်ရတာမို့ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှ ရေစိမ်ပီးမျောချင်တာ 😆
ရေဘူးတွေ၊ Royal D တွေ အကုန်ပါပါတယ်။ အပြန်လမ်းက ပိုပင်ပန်းပါတယ် လမ်းလျှောက် တောင်တက်ရတော့😥 ညနေ စောင်းမှာအပေါ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။
လမ်းပြအကိုတွေထည့်လာပါတယ်။ တောတွင်းခရီးသွားတာဆိုတော့ ချေးများနေလို့မရပါဘူး။ စားရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ နေရာဒေသနဲ့လိုက်ပြီး စားသောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
✔️ ဘာတွေဆောင်သွားမလဲ ?
Adventure ခရီးဆိုတည်းက အဓိကလိုတာကတော့ ဖိနပ်ပါ။ စစ်ဖိနပ်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ ညှပ်ဖိနပ်တော့ မစီးပါနဲ့။ ခုမှ သွားမယ့်လူတွေအတွက် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး။ အတက်အဆင်းများပြီး မက်ပါတယ်။ ရေစိုခံအိတ်ယူသွားပါ။ လက်အိတ်မဖြစ်မနေယူသွားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အပေါ့ပါးဆုံးသွားပါ။ လက်ရှည်လေးဝတ်သွားပါ။
🔴 သင့်ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှကို မထိခိုက်ပါစေနဲ့ ✔️
စားပြီးသားအခွံများ၊ အအေးဘူးခွံများကို ကိုယ့်အိတ်ထဲ ကိုယ်ပြန်ထည့်သွားပါ။ လမ်းပြကတော့ စားပြီးရင် မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အမှိုက်လုံးဝပစ်မချခဲ့ပါနဲ့။ ဘာဆိုဘာမှမချန်ခဲ့ပါနဲ့။ အမှတ်တရတွေပဲချန်ခဲ့ပါ ❤️
ရေမျောပြီးသွားချင်ရင် မိုးတွင်းမရပါဘူး။ ချောင်းရေကြီးလို့ပါ။ ရေမျောပြီးသွားတဲ့ ခရီးစဉ်က သဒ္ဓါတို့သွားတဲ့ လမ်းပြအကိုဆီမှာပဲ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
Camping လုပ်ပြီး ညအိပ်လို့ရပါတယ်။ အချိန်ရှိတုန်းသဘာဝအလှတွေမပျက်စီးခင် အခွင့်ရေးရှိတုန်း သဘာဝအလှတွေဆီ ရောက်အောင်သွားကြည့်ပါ။ သင့်ဘဝအတွက် မေ့မရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခု ကျန်ခဲ့မှာသေချာပါတယ်။
သဒ္ဓါတို့ သွားတဲ့ နောင်ချိုတာဇံလို့ တင်စားကြတဲ့လမ်းပြအကို ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး သွားလို့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ကို – 09760771787
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဒီအထိရောက်ပီး ချောင်းကို မိနစ် ၂၀လောက်လျှောက်ရပါတယ်
ဂျပန်ခေတ်က တံတားကိုမိုင်းခွဲခဲ့လို့ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ အပိုင်းအစတွေ
ဂူအစပဲရှိသေးတယ် အရမ်းကို မှင်သက်နေရပါပီ
အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Instagram မှာလဲ Follow လုပ်ပြီး ခရီးသွားပုံတွေကြည့်လို့ရပါတယ် ❤️
Ig – aye_thader_hlaing